Dukumiintiyada been-abuurka ah - ku soo iibso dukumintiga been-abuurka ah khadka tooska ah | Dukumiintiyada Caalamka
Iibso Liisanka Darawalnimada iyo Kuwa kaleba Khadka Tooska ah
Iibso Liisanka Wadista
Soo Iibso Kaarka Aqoonsiga
Iibso Ogolaanshaha Deganaanshaha
Iibso Shahaadooyinka IELTS
Iibso Shahaadooyin Kale
- Dooro - Iibso Kaarka Deganaanshaha UK Shaqada Kanada Ruqsadaha Deganaanshaha Kanadiyaanka Iibso Shahaadooyinka IELTS Iibso Shahaadooyinka Dhalashada ee Asliga ah Iibso Kaararka Aqoonsiga ee UK Iibso Kaararka Aqoonsiga Jarmalka Iibso Wadamada Midowga Yurub liisanka darawalka Iibso laysanka darawalnimada ee Mareykanka (dhammaan gobollada la heli karo) XUQUUQAHA KALE JAAMACADA JOOGISTA SHAHAADADA IELTS XAALADAHA SHAQAALAHA JOOGAHA EE CANADA Iibso Baasaboorada Nederland-ka ee Hore Iibso Liisanka Wadista Wadamada Aasiya Soo Iibso Baasaboorrada Shiinaha ee Diiwaangashan Iibso laysanka darawalnimada ee Kanada Iibso Kaararka Aqoonsiga Polish Iibso Liisanka Darawalka Jarmalka Soo Iibso Kaararka Aqoonsiga Talyaani Iibso laysanka darawalka iswiidhishka Soo Iibso Dibloomooyinka Diiwaangashan Iibso Liisanka Darawalka Talyaani ee Diiwaangashan Ku hel fiisooyinka Waddamada EU mid sahlan Soo gado Ruqsadda Darawalnimada Hangari Soo Iibso Kaarka Cagaaran ee Beenka ah ee Real Fake American Green Card Soo Iibso Liiska Darawalka Joogtada ah ee Boqortooyada Midowday Iibso Ogolaanshaha Deganaanshaha Iswidishka Iibso laysanka darawalnimada Romanka Kaararka Aqoonsiga Iibso Liisanka Darawalnimada Biljamka Soo Iibso Baasaboorada Kuuriyada Hore Iibso Liisanka Wadista Isbaanishka Iibso Baasaboorrada Aasiya Iibso Liisanka Darawalnimada Polish Iibso Xirmooyinka Aqoonsiga oo Buuxda Wadamada EU Iibso Liisanka Darawalka Faransiiska Soo Iibso Kaararka Aqoonsiga Beljamka Iibso laysanka darawalnimada ee Austrian Iibso Kaararka Aqoonsiga Jarmalka Iibso Liisanka Darawalka Boortaqiiska Iibso Kaararka Aqoonsiga Wadamada Aasiya Soo gado Ruqsadda Darawalnimada Noorwiijiga Iibso Dhabta TOFL Codso laysanka Darawalnimada Bulgaariya Iibso Shahaadooyinka Guurka dhabta ah Hel Liisanka Wadista Gaarka ah ee Nederlaand Codsashada Fiisaha Mareykanka iyo Fiisaha Kanada Iibso laysanka darawalnimada deenishka Codso Visa UK Iibso Shatiga Wadista Switzerland / Shatiga Wadista Swiiska Iskuulka Kanada Iibso Baasaboorrada rasmiga ah ee Mareykanka Ruqsadaha Deganaanshaha Midowga Yurub Iibso Baasaboorrada dhabta ah ee Canadian-ka Ruqsadaha Deganaanshaha Talyaani Iibso Baasaboorrada EU Ruqsadaha Deganaanshaha Aasiya waa la heli karaa Iibso Baasaboorada Boqortooyada Midowday Iibso Kaarka Deganaanshaha UK XUQUUQDA DHALINYARADA
SHAQAALAHA JOOGAHA EE CANADA
Iibso Wadamada Midowga Yurub liisanka darawalka
Iibso laysanka darawalnimada ee Mareykanka (dhammaan gobollada la heli karo)
Iibso Liisanka Wadista Wadamada Aasiya
Iibso laysanka darawalnimada ee Kanada
Iibso Liisanka Darawalka Jarmalka
Iibso laysanka darawalka iswiidhishka
Iibso Liisanka Darawalka Talyaani ee Diiwaangashan
Soo gado Ruqsadda Darawalnimada Hangari
Soo Iibso Liiska Darawalka Joogtada ah ee Boqortooyada Midowday
Iibso laysanka darawalnimada Romanka
Iibso Liisanka Darawalnimada Biljamka
Iibso Liisanka Wadista Isbaanishka
Iibso Liisanka Darawalnimada Polish
Iibso Liisanka Darawalka Faransiiska
Iibso laysanka darawalnimada ee Austrian
Iibso Liisanka Darawalka Boortaqiiska
Soo gado Ruqsadda Darawalnimada Noorwiijiga
Codso laysanka Darawalnimada Bulgaariya
Hel Liisanka Wadista Gaarka ah ee Nederlaand
Iibso laysanka darawalnimada deenishka
Iibso Shatiga Wadista Switzerland / Shatiga Wadista Swiiska
Iibso Baasaboorrada rasmiga ah ee Mareykanka
Iibso Baasaboorrada dhabta ah ee Canadian-ka
Iibso Baasaboorrada EU
Iibso Baasaboorada Boqortooyada Midowday
Iibso Baasaboorada Nederland-ka ee Hore
Soo Iibso Baasaboorada Kuuriyada Hore
Soo Iibso Baasaboorrada Shiinaha ee Diiwaangashan
Iibso Baasaboorrada Aasiya
Iibso Kaararka Aqoonsiga ee UK
Iibso Xirmooyinka Aqoonsiga oo Buuxda Wadamada EU
Iibso Kaararka Aqoonsiga Polish
Soo Iibso Kaararka Aqoonsiga Beljamka
Iibso Kaararka Aqoonsiga Jarmalka
Soo Iibso Kaararka Aqoonsiga Talyaani
Iibso Kaararka Aqoonsiga Wadamada Aasiya
Iibso Dhabta TOFL
Soo Iibso Dibloomooyinka Diiwaangashan
Iibso Shahaadooyinka Guurka dhabta ah
Iibso Shahaadooyinka Dhalashada ee Asliga ah
Codsashada Fiisaha Mareykanka iyo Fiisaha Kanada
Ku hel fiisooyinka Waddamada EU mid sahlan
Codso Visa UK
Soo Iibso Kaarka Cagaaran ee Beenka ah ee Real Fake American Green Card
Ruqsadaha Deganaanshaha Midowga Yurub
Ruqsadaha Deganaanshaha Kanadiyaanka
Ruqsadaha Deganaanshaha Talyaani
Iibso Ogolaanshaha Deganaanshaha Iswidishka
Ruqsadaha Deganaanshaha Aasiya waa la heli karaa
Iibso Kaarka Deganaanshaha UK
LUUQADDA SAACADAHA SII SAARKA | SAMEE FUUQDA BAARLAMAANKA | Kaarka Aqoonsiga SCANNABLE | Kaarka Aqoonsiga | RASMI LA'AANKA LA XIRI KARAA | FASAHA UGU BILAASH | SHAHAADADA DHALASHADA | JADWALKA SHAQADA UGU BADAN | SAMEE GUUR GUUR | XUQUUQAHA IILAALKA EE DIIWAAN GELINTA IYO KARA.
Dukumiintiyada caalamiga ah, waxaan nahay xiriir furan oo la cadeeyay oo la diiwaan geliyay dokumentiyada been abuurka ah ee adduunka oo dhan. Tirakoob caalami ah ee wax soo saarka billaha ah ee la soo saaray ayaa hoos lagu soo bandhigay. Tirinta waxaa si joogto ah loogu cusbooneysiiyaa tirakoobka billaha cusub. Macaamiisha ayaa adeegsada websaydhka oo kuxiran shuruudahooda, waxaan go'aan ka gaarnaa hay'adda gacanta ku haysa dalabkooda. Hay'ado badan ayaa dalban kara inay ku biiraan ururkan. Si kastaba ha noqotee, waxaan xaqiijin karnaa codsiyada oo keliya marka codsaduhu keeno seddexda dukumiinti oo uu bixiyo lacagta xubinnimada. Dukumiintiyada aan bixinno waxaa ka mid ah liisanka darawallada been abuurka ah, diiwaangelin baasaboor been abuur ah, id been abuur ah, diiwaangelin deggenaansho been abuur ah, shahaadada guurka been-abuurka ah, iibsashada shahaadada IELTS-ka, dibloomaasiyada been-abuurka ah, iwm.
Tirakoobka billaha ah ee Sebtember 2019:
Baasaboorada adduunka oo dhan
Shahaadooyinka iyo kuwa kale
Kaararka Aqoonsiga been-abuurka ah
Xusuusin: Dukumiintiyada caalamiga ahi kumuujin karaan sawirro tusaale ah bartayada internetka maxaa yeelay macluumaadka macmiilku wali waa qarsoodi. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u baahan tahay inaad aragto sida baasaboor, laysanka darawalnimada, iwm uu u eg yahay, nala soo xiriir annagana waan la xiriiri doonnaa mid ka mid ah macaamiisheena si aan u helno oggolaansho aan kuugu soo dirno dukumiintiyadooda si ay u arkaan.
SOO GUDBINTA | LUUQADAHA KU SAMEE INTA LIISKA
Isticmaalayaasha waddooyinka adduunka oo dhami waxay isticmaalaan laysanka darawalnimada si ay isu aqoonsadaan. Laysanka darawalka wuxuu si siman u qeexayaa nooca gaariga ee heysta loo oggol yahay inuu shaqeeyo. Si kastaba ha noqotee, dhibaatooyin badan ayaa adduunka lagala kulmaa helitaanka laysanka darawalnimada. Dukumiintiyada caalamiga ahi waxay bixiyaan xawaare qiimo jaban oo loogu talo galay dadka doonaya inay iibsadaan laysanka darawalnimada. Si aan u maarayn karno dhibaatadan adduunka oo dhan, waxaan si taxaddar leh ula macaamilaynaa saaxiibbadii caddeeyey naftooda iyagoo siiya rukhsadda wadista baabuurta ee gobolkooda si joogto ah iyo waqtiga.
Intaa waxaa sii dheer, weheliyadeena waxaa ka mid ah in kabadan 132 milkiileyaasha iskuulka, wakiillada fulinta sharciga iyo saraakiisha gaadiidka. Waxaa intaa u dheer, kooxdayaga sumcadda leh waxaan si sharci ah ugu sharciyeeynaa laysanka darawalka ee laga soo iibsaday hay'adaheena anagoo si rasmi ah uga diiwaangelineyna keydka macluumaadka dowladda. Tusaale ahaan, Boqortooyada Midowday, waxaan iska diiwaan gelinaa DLA iyo DVLA. Iibso liisanka wadista gawaarida tooska ah adoo adeegsanaya dukumintiga adduunka adoo si fudud halkan uga dalbaya. Walbahaar la'aan imtixaanada wadista, bilo ma sugaan, ganaax la'aan. Si sharci ah u wad
CODSIGA LUUQADAHA BAARLAMAANKA ONLINE
Si aad nooga hesho rukhsadda darawalnimada, waa inaad lahaataa nala soo xiriir Iyada oo loo maro websaydhka si mid ka mid ah macaamiisheenna uu kugu hago tilmaanta sidaad u adeegsan lahayd annaga Foomka codsiga laysanka darawalka. Xusuusnow inaad doorato foomka dalabka haddii aad rabto liisan darawalnimo dhab ah ama laysan darawalnimo been abuur ah.
Farqiga udhaxeeya REAL IYO FASALKA LAGU SAMEEYO
Ruqsadda darawalnimada dhabta ah ee dukumiintiga Caalamiga ah waxaa laga diiwaangeliyaa keydka macluumaadka dowladda waxaana lagu ansaxin doonaa nidaam kasta oo iskaanka ah. Markaad leedahay laysanka darawalnimada dhabta ah, waxaad ku kalsoontahay dhammaan jeegaga iyo xaqiijinta xitaa shilalka.
Dhanka kale, laysanka darawalnimada been abuurka ah wuxuu aad ugu eg yahay laysanka darawalnimada dhabta ah. Si kastaba ha noqotee, macluumaadka liisanka darawalnimada been abuurka ah kama diiwaangashan yahay diiwaan kasta oo dawladda ah. Tani waxay ka dhigan tahay in isticmaaleha liisanka darawalnimada been-abuurka ah uusan dhaafi doonin nidaam kasta oo iskaanka oo aan la ogaan. Dadku waxay kaliya iibsadaan laysanka darawalnimada been abuurka ah sababta oo ah waa raqiis yihiin badanaana waxaa looga isticmaalaa tuulooyinka.
KU SOO DHAWEYN KHATARAHA SIYAASADA | KU SAMEE CUDURKA KU SAABSAN ONLINE
Waxaad ku heli kartaa baasaboor dhab ah oo toos ah khadka tooska ah iyo qiimayaasha la awoodi karo. Tani waxay si fudud u fududayn kartaa safarka dadka ee dalalkooda riyada ah iyo kuwa kale ee u safraya meheradda si aad u fudud. Si aad u hesho baasaboor dhab ah khadka tooska ah, kaliya ka dalbo goobtan oo ku sheeg qaybta qoraalada gaagaaban ee foomka dalabka inaad rabto baasaboor dhab ah. Faahfaahin intaas ka sokow, sidoo kale ku qor foomka wadanka aad rabto baasaboorkaaga dhabta ah in lagu dhiibo.
Waxaan ilaalinaa dhammaan waraaqaha oo dhan waxaadna u baahan tahay inaad sameyso waa inaad na siiso macluumaadka loo baahan yahay ee loo yaqaan bio-metric marka lagu daro taariikhda aad rabto ee go'aamiya taariikhda uu dhacayo baasaaboorkaaga dhabta ah.
Intaa waxaa dheer, waxaan bixinnaa baasabooro diiwaangashan oo dowladda ka tirsan oo la kulma heerarka amniga oo aan ku gudubno hanaan kasta oo iskaanka ah annagoo u hoggaansanayn mashiinnada akhrinta macluumaadka.
Ugu dambeyntiina, Baasabooradayada dhabta ah waa la soo saaray, la baarayaa, la diiwaangeliyaa oo si baaxad leh loo tijaabiyaa taas oo macaamiisheenna iyo kalsooni ahaan ay u isticmaalaan inay u safraan adduunka oo ay uga shaqeeyaan meel kasta oo ay aadaan. Kaliya la xiriir wakiiladeena si ay kuugu hagaan dalbo baasaaboorkaaga dhabta ah.
KU SAMEE FASALADA KHUDBADA EEKAN
Dukumiintiyada Caalamiga ah waxay sidoo kale soo saaraan baasabooro been abuur ah qaar ka mid ah macaamiisha doonaya inay iibsadaan baasaboorada ayna u isticmaalaan kaliya ulajeeddooyin xayiraad. Baasaboorka beenta ah wuxuu u eg yahay baasaboorka dhabta ah, isla tayada iyo astaamaha qarsoon.
Si kastaba ha noqotee, farqiga udhaxeeya baasaboorka been abuurka ah iyo baasaboorka dhabta ah ayaa ah markaad iibsato baasaboorada been abuurka ah khadka tooska ah, macluumaadka baasaboorka been abuurka ah laguma diiwaangelin keydinta dowlada. Intaa waxaa dheer, maqnaanshaha macluumaadka baasaboorka been abuurka ah ee xogta dowladda ayaa ka dhigeysa qofka sita baasaboorka been abuurka ah inuu u nugul yahay arrimaha amniga ee baaritaannada garoonka diyaaradaha.
Ugu dambeyntiina, illaa iyo inta macmiisha badankood jecel yihiin inay haystaan ​​Baasabooradayada been-abuurka ah qiimahooda raqiis ah, waxaan had iyo goor kula talineynaa inay u baxaan baasaboorada dhabta ah, inkasta oo ay qaali yihiin sababtoo ah waxay ku badbaadaan meelkasta oo ay joogaan. Waxaan si wanaagsan u qaban doonnaa inaan cusboonaysiinno liisaskayaga qiimaha internetka. La xiriir wakiiladeena websaydhka oo waxay kugu hagi doonaan inaad buuxiso foomka dalabka ee baasabooro been abuur ah.
Ka soo iibso Kaararka Aqoonsiga ONLINE
Dukumiintiyada caalamiga ahi waxay soo saaraan kaararka id ee dhabta ah. Tayada kaararka Aqoonsiga dhabta ah ee dukumiintiga adduunka waa shaki la'aan. Ka sokow tayada jidheed ee Kaararka Aqoonsiga dhabta ah ee iibka websaydhkeena, waxaan hubineynaa in macluumaadka lagu diiwaangaliyay nidaamyada keydka macluumaadka ee dowladda. Wax cabsi ah kama qabtid inaad kaararkayaga Aqoonsiga rasmiga ah geyso mashiinnada iskaanka baarista xogta dowladda. La xiriir wakiiladeena adigoo adeegsanaya websaydhkaan sidaa darteed hagida aad ku dalbaneyso. Foomka Codsiga Kaararka Aqoonsiga.
SAMEE Kaararka Aqoonsiga ONLINE
Kaararka Aqoonsiga Aqoonsiga ee dukumiintiga adduunka waa isla siman yihiin tayo jir ahaan wanaagsan. Marka la barbardhigo kaararka aqoonsiga dhabta ah ee aad naga hesho, Kaararka Aqoonsiga been abuurka ah laguma diiwaangelin keydka macluumaadka dowladda. Sidaa daraadeed, Kaararkayaga Aqoonsigayaga been-abuurka ah lama ansaxin kumbuyuutarrada xaqiijinta xogta Kaararka Aqoonsiga. Si aad u iibsato kaarka Aqoonsiga been abuurka ah ee nidaamkayaga, la xiriir wakiilladayada si aad u hagto oo u dalbatid habka Foomka Aqoonsiga Kaarka Aqoonsiga.
SAMEE FASALADA JOOJINTA SIYAASADA
Iibso rukhsadaha daganaanshaha rasmiga ah dukumintiga caalamiga ah adoo iibsanaya "ogolaanshaha deganaanshaha" foomamka dalabka. Ogolaanshahayaga joogitaanku wuxuu dammaanad ka dhiganayaa joogitaankaaga sharciga ah wadankasta oo aad jeceshahay. Kaararka cagaaran ee Mareykanka tusaale ahaan waa mid ka mid ah rukhsadaha degenaanshaha adduunka ee ugu qaalisan adduunka. Waxaan si xushmad leh ula macaamilnaa macluumaadkaaga sharciga imigarayshanka waxaan sharciyeynaynaa joogitaankaaga dalkaaga riyada. Dukumiintiyada caalamiga ah, waad iibsan kartaa rukhsadaha deganaanshaha asalka ah, waxaad ka iibsan kartaa Kaararka Mareykanka ee GREEN, waxaad ka iibsan kartaa rukhsadaha deganaanshaha Kanada, ka iibsadaan rukhsadaha deganaanshaha Jarmalka, iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaan u gaarsiinaa kaararkaaga deggene si amaana meeshaad doorato. Nala soo xiriir iyo ka codso rukhsadahaaga deganaanshaha HALKAN.
KU SAMEE CIDHAHA SIYAASADA EE Khadka tooska ah
Dukumiintiyada caalamiga ah waxay si guul leh u keeneen dhowr shahaadooyin waxbarasho iyo mid bulsheed macaamiisha baahan. Codsiga shahaadooyinka akadeemiyada ee 2019 waxaa mudnaanta siiyay dadka codsanaya shahaadooyinka IELTS khadka tooska ah. Macaamiisha badanaa waxay codsadaan inay ka iibsadaan shahaadooyinka ielts Council Council ee Ingiriiska, ka iibsadaan shahaadooyinka Cambridge ielts khadka tooska ah, ka iibsadaan shahaadada idp ielts khadka tooska ah. Waxaan si isku mid ah u bixinaa dibloomada jaamacadda iyo shahaadooyinka jaamacadda, G. xisaab, TOFL, iyo kuwa kale oo badan. Nala soo xiriir si aad u ogaato haddii aan bixinno shahaadadaada loo baahan yahay. Waxaa laga yaabaa inaan kaa caawin karno inaad hesho riyadaada shaqada.
Shahaadooyinka bulshada oo ay ku bixiyaan dokumentiyo caalami ah waxaa ka mid ah: shahaadooyinka guurka, shahaadooyinka dhimashada, shahaadooyinka dhalashada iyo waxyaabo kaloo badan. Nala soo xiriir dalbo shahaadooyinkaaga.
Dukumiintiyada caalamiga ah ee dokumeentiga ah waxay adeegsadaan shabakadeeda adag si ay u helaan shaqooyin adduunka oo dhan oo la jaan qaada tilmaamaha codsadaha. Codsadayaasha caalamiga ah ee shaqooyinka dalbada ayaa dalban doona midkeenna foomka dalabka shaqada . Dukumiintiyada caalamiga ah waxay awoodeen inay shaqo u helaan macaamiisha waxayna baaraandeyn dukumiintiyadooda si ay ugu haajiraan Canada, UAB, USA, Europe iyo South Korea. Kusoo dhejiso astaantaada wakiiladeena ayaa kula soo xiriiri doona waxaana rajeyneynaa inay kuu helaan shaqo iskufilaan meesha aad higsaneyso. Waxaan helnay macaamiil doonaya shaqooyin dalal gaar ah si ay u fududeeyaan socodsiinta fiisahooda. Haddii ay dhacdo Kanada, macaamiisha noocaas ahi waxay u maqan yihiin dalabyo shaqo oo LMIA oggolaaday.
XARUNTA DHAQANKA EE INTER
Caalamku kama hadli karo xoojinta faa iidada ay leedahay in lala wadaago hay'adaha kale ee dukumiintiyada soo saarta ee adduunka. Dukumiintiyada caalamiga ahi waxay talo ka bixinayaan in hay'ad kasta oo sharci ah oo doonaysa inay ballaadhiso awooddeeda ay ku habboon tahay inay qayb naga noqoto. Waxaan kaa ilaalin doonaa faahfaahinta si qarsoodi ah, markalena, waxaad had iyo jeer ka heli kartaa caawimaad hay'ad kasta oo xubin ka ah sidii loo hubiyo in alaabadaadu ay la jaanqaadaan heerarka hadda jira. Intaas waxaa sii dheer, in hay'adaha macmiisha ay helaan caawimaad ku saabsan soo gudbinta alaabada si loo yareeyo tirakoobka tirada haldheegyada gudbinta iyo joogtaynta sumcadda ururkeena. Si aad ugu biirto ururkan, waxaad ka dalbaneysaa isku xirka websaydhkan (Codso ku biirista) oo caddeeya awoodahaaga adoo si guul leh ugu gudbinaya seddex dukumiinti oo gobolkaaga ah, sidoo kale waa inaad lahaataa degel internet kuu ah ugu dambeyntiina markii la aqbalo, waxaad bixinaysaa khidmadda diiwaangelinta ee 5000 USD. Ku soo dhawoow qaybteenna
Codsi inaad ku biirto
× Sideen kuu caawin karaa?